Iicalligraphers ezifumaneka kuyilo lwegraphic kwaye kufuneka wazi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwihlabathi elikhulu lobugcisa zininzi iitalente ezingaziwa kakuhle, Benza izinto eziwisa umhlathi ngokulula okanye ngokuzinikela.
Xa umhlaba ubamkela aba bazobi banetalente, bahlala bekhona umonde wakhe okanye ebhedini yokufa, kodwa oku akunjalo ngee-calligrapher, kuba aba balinganiswa ngabaculi ababalaseleyo abanesakhono sokudlala nabo iimilo, ukubetha, imibala kunye nokungafani Ngendlela engafaniyo nenye, yiyo loo nto kwesi sithuba siza kukhankanya kancinci malunga neli hlabathi linomdla kunye nendlela ofuna ukuyimela ngayo.
1 Yintoni i-calligraphy kuyilo lwegraphic?
2 Iyiphi indima edlalwa ngumlobi wecalligrapher?
Yintoni i-calligraphy kuyilo lwegraphic?
Ukuqala, I-calligraphy ngaphezu kobugcisa ithathwa njengengcingaIngathi umntu ngamnye kuthi uzimele ngokubhala kwethu.
Le mfundiso iqulathe ukufunda iileta nokubhala, yefom kunye nobuchule obusetyenzisiweyo ukuyenza kwaye yenziwa phi umphezulu. Ngaphandle kokuyazi ngokucacileyo imvelaphi, kwaqinisekiswa ukuba umntu wazalwa enomnqweno wokulandela umkhondo owawusenzeka rhoqo kwimbali.
Izixhobo esizisebenzisayo ukubhala ziye zavela zaba yilento ziyiyo namhlanje kwaye ngaphandle kokucinga ngayo, sigcine isithethe sokusebenzisa izinto ezithile ezibonakalisa inkcubeko yethu okanye indlela yethu.
Kodwa ngokuhamba kwexesha, indlela ezisetyenziswa ngayo izixhobo zokubhala sele ingaphezulu kokusebenza nje okanye ngamanye amagama, kule mihla ungafumana imizekelo engapheliyo yokubhala ngesandla okanye ikhompyuter yecrafigraphy., Ke oku ngaxeshanye kuyayichaphazela le nyaniso.
Itekhnoloji ibangele ukonyuka kubuchwephesha ngubani ongafuni nto ngaphandle kokuseka ipatheni yokubhala yoonobumba, oku kudideka ngokulula kunye necalligraphy.
Iifom, intetho kunye nazo zonke izinto ezikhoyo ngokubhaliweyo zichazwe kakuhle namhlanje kwaye yile nto calligraphy yile nto iyidibanisayo, kodwa ngaphezulu kwecalligraphy yile calligrapher.
Iyiphi indima edlalwa ngumlobi wecalligrapher?
I-calligrapher ngesiqhelo uphatha yonke imiba yokubhala, unokuyicacisa kwaye uyizise kwipateni ye-harmonic okanye usebenzise nje iimilo ukufaka oonobumba.
Mhlawumbi kuninzi olu luvo ludidekile kodwa kulo mhlaba kukho izinto ezintathu ezinendawo yazo yokusebenza kwaye ezinxulumene ngokusondeleyo enye nenye kodwa ngaphandle kokulingana, ezi zezi i-calligraphy, ukubhala kunye ne-typography.
Ukukubeka ngamagama ambalwa, Ukubhala yindlela entsha Eyona nto iphambili kwihlabathi loonobumba, baphumeza izinto ezongezelelweyo zokuhombisa oonobumba, ukubhala ayisiyonto ixhaphakileyo apha kodwa ubuchule ngokuchaseneyo, oku kukude ngakumbi kwiileta ngokwazo, ke ngoko ngokubanzi, ukubhala ngokugqibeleleyo akufuneki .
I-Calligraphy endaweni yoko, ewe ifuna ukuqaqambisa ukubetha ngakunye ukwenza oonobumba bagqame ngokwabo, kunye nemigaqo yegrama efanelekileyo.
Ngoku, typography njengoko sele sichazile ngasentla yinkqubo eye yaziswa ngenxa yokuzalwa kweekhompyuter kuluntu lwethu. Ezi zezona zimisela imigaqo ukuze iileta zisetyenziswe njengeetemplate ngaphandle kokuchitha ngexesha lokusetyenziswa kodwa ngaphandle kokuphulukana nobuhle obufanelekileyo.
Ukwazi lo mahluko, sinokunikezela ngendawo encinci kumagcisa adumileyo obugcisa obuhle be-calligraphy, baye babalasela ngomsebenzi wabo onomdla nokhuthazayo kwaye kufuneka kuthiwe ubukhulu becala bazinikele ekusebenzeni ngokuzimeleyo kunye nokufundisa, kodwa ngaphandle kokulahla ubugcisa bakhe, phakathi kweecalligrapher ezinkulu zigqamile URicardo Rousselot, uIvan Castro, uMartina Flor, uKeith Adams, uJessica Hische, uJohan Quirós, uRob Draper, uSeb Lester, uJulien Breton, uEl Seed, uMnu Zé, uGlen Weisgerber, uOriol Miró, uMarian Bantjes, phakathi kwabanye…
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iicalligrapher ezifumaneka kuyilo lwegraphic kwaye kufuneka uyazi